Lapatinib uzuzu (231277-92-2) hplc =98% | AASraw R & D Reagents
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Lapatinib ntụ ntụ (231277-92-2)
SKU: 231277-92-2. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Lapatinib uzuzu (231277-92-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Lapatinib uzuzu uzuzu
Lapatinib uzuzu isi agwa
aha: Lapatinib uzuzu
Molekụla Formula: C29H26ClFN4O4S
Ọbara arọ: 581.05
Raw Lapatinib ntụ ntụ na Antineoplastic Agent okirikiri
Aha njirimara: Lapatinib powder (la PA tin ib)
Aha aha: Tykerb
Raw Lapatinib uzuzu uzo
Lapatinib uzuzu bụ ọgwụ ọgwụ edere na ọgwụ ọzọ (capcitabine) iji na-emeso ndị nwere ọrịa ara ara na-agbasa na akụkụ ndị ọzọ nke ahụ bụ HER2 nti (etuto ahụ na-emepụta ọtụtụ protein nke a na-akpọ na-eto eto na-eme ka onye na-anabata ihe-2) , na ndị nwere ụfọdụ ọgwụgwọ ọrịa kansa.
A na-ejikwa ọgwụ na-agwọ ọrịa Lapatinib na-eji ụdị ọgwụgwọ a na-akpọ letrozole maka ọgwụgwọ nke ụmụ nwanyị postmenopausal nwere ihe nlekota hormone dị mma, HER2 ọrịa cancer nke metastatic dị mma nke e gosipụtara ọgwụgwọ hormonal.
Lapatinib ntụ ntụ bụ ọgwụ ọgwụ edere iji agwọ ọrịa kansa. A na-eji ya na ọgwụ ndị ọzọ na-agwọ ọrịa ụfọdụ nke ọrịa kansa nke gbasaa n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ, nke ahụ emebeghịkwa ka agwọ ọrịa kansa ọzọ.
Lapatinib uzuzu bụ otu ìgwè ọgwụ ndị a na-akpọ ndị na-eme ihe na-adịghị mma kinase nke na-arụ ọrụ site na igbochi ọrụ nke protein ụfọdụ nke na-egosi sel cancer ka ọ bawanye ụba.
Nri a na-abata na mbadamba ụrọ ma were otu ugboro kwa ụbọchị na afo efu.
Mmetụta ndị na-emekarị nke Lapatinib ntụ ntụ na-acha ọbara ọbara, aka na ụkwụ na-egbu mgbu, afọ ọsịsa, ọkụ ọkụ, na ọgbụgbọ.
Kedu ihe bụ usoro ọgwụgwọ Lapatinib ntụ ntụ
Okenye na-emekarị agadi maka ọrịa cancer
CHANGE NA METASTATIC ANYỊ NA-ECHICHE (dịka ya na capecitabine): 2 mg na-ekwu otu ụbọchị n'ụbọchị 1250 na 1 na-emegharị usoro ihe omume 21 ruo mgbe ọrịa na-aga n'ihu ma ọ bụ na-adịghị anabata ya.
AKWỤKWỌ NDỊ BỤRỤTA-ANYỊ NA-ECHICHE, HER2-POSITIVE MASTASTATIC BREAST CANCER (nke a na-ejikọta na letrozole): 1500 mg okwu otu ugboro n'ụbọchị.
-Consult onye na-emeputa ihe ọmụma maka capecitabine na letrozole dosing kwadoro.
-HER2-ezigbo metastatic cancer kansa ọrịa kwesịrị inwe ọrịa na-aga n'ihu na trastuzumab tupu ibido nke ọgwụgwọ a ọgwụ na Nchikota na capecitabine.
-N'onye na capecitabine maka ọgwụgwọ nke ndị nwere ọrịa kansa ma ọ bụ metastatic cancer nke na-agbanye HER2 na ndị natara tupu usoro ọgwụ gụnyere ihe anthracycline, ụtụ, na trastuzumab.
-N'ikoro na letrozole maka ọgwụgwọ nke ụmụ nwanyị postmenopausal nwere ihe nlekota nke hormone - ọrịa cancer nke metastatic ziri ezi nke na-egosi na ọ bụ onye na-anabata HER2 maka ọgwụgwọ hormonal.
Enweghi data maka mgbanwe ndi ozo; Otú ọ dị, ọgwụcokinetics nke ọgwụ a enweghi ike emetụta na enwere ihe na-erughị 2% nke dose na-edozi site akụrụ.
MGBE MGBE MGBE NA-ECHICHE IMPAIRMENT (CHILD-PUGH A / B): Data adịghị.
MGBE OBI NA-ECHICHE NDỊ MMADỤ (CHILD-PUGH C): Belata oge:
-HER2-Ọrịa Cancer Na-ahụ Maka Ọkụ Na-eme Ihe (dịka ya na capecitabine): 750 mg / ụbọchị.
-Nke Na-anabata Ihe Na-eme Ihe, HER2-Cancer Metastatic Breast Cancer (na nchikota na letrozole): 1000 mg / day
AKWỤKWỌ NDỊ NA-ECHICHE NA-ECHICHE NA-AHỤ: Na-akwụsị ịgwọ ọrịa kpamkpam.
Nkwupụta: Ntụle mgbanwe na-adabere na nnyocha ọgwụ pharmacookinetic; Enweghị data nlebara anya dị.
MGBE A GA-EKWU NDỊ CYP450 3A4 INHIBITORS CYP450 NA / MAKWA CYP3 4AXNUMX NDỊ AHỤRỤ: Zere ijikọta ọnụ ma ọ bụrụ na o kwere omume. Ntụle mgbanwe na-adabere n'ọmụmụ ọgwụ pharmacookinetic; Enweghị data nlebara anya dị.
MGBE A GA-EME EKWUKWU CYP450 3A4 INHIBITOR: Belata ọgwụ na 500 mg / ụbọchị; kwe ka oge nnochi nke ihe dị ka izu 1 tupu ngbanwe nke ọgwụ a ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na onye na-emechi ya akwụsị.
MGBE A GA-EME EKWUKWU CYP450 3A4 INDUCER: Na-eji nwayọọ nwayọọ na-agbatị dose dabeere na nkwado; belata ụda azụ na ụma a na-atụ aro ya ma ọ bụrụ na onye nkedo akwụsị.
-HER2-Ọrịa Cancer Na-ahụ Maka Ọkụ Na-ahụ Anya (dịka ya na capecitabine): Mee ka ntinye aka ruo 4500 mg / ụbọchị.
-Nke Na-anabata Ihe Na-eme Ihe, HER2-Cancer Metastatic Breast Cancer (na-emekọ ọnụ na letrozole): Mụbaa dose ruo 5500 mg / ụbọchị.
2 GAA ma ọ bụ onye ukwu nwere ike iwepụ ihe ọhụụ (LVEF) MA Ọ BỤ Ọ BỤ N'ỤLỌ BỤ NTỤKWỌ NTỤKWỌ: Nkwụsịtụ ọgwụgwọ; nwere ike ịmalitegharịa mgbe ọ dịkarịa ala nke izu 2 ma ọ bụrụ na LVEF gbakee na nkịtị na ndidi bụ asymptomatic.
Ihe na-ebelata ala:
-HER2-Ọrịa Cancer Na-ahụ Maka Ọkụ (nke dị na capecitabine): 1000 mg / ụbọchị
-Nke Na-anabata Ihe Na-eme Ihe, HER2-Cancer Metastatic Breast Cancer (na nchikota na letrozole): 1250 mg / day
3 OR GRADE 1 ma ọ bụ 2 DIARRHEA NDỊ NA-ECHICHE ỤMỌDỤ (nkwụsị nke abdominal siri ike, 2 ọkwa ma ọ bụ ọgbụgba oke ma ọ bụ vomiting, ụda ọrụ arụ ọrụ, fever, sepsis, neutropenia, ọbara ọbara ọgbụgba, ma ọ bụ mmịkpọ mmiri): Ka reintroduce na obere dose mgbe afọ ọsịsa kpebisie ike na 1 ogo ma ọ bụ obere.
-HER2-Ọrịa Cancer Na-ahụ Maka Ọrịa Na-ahụ Anya (dịka na capecitabine): 1000 mg / ụbọchị
- Onye na-anabata ihe na-eme ebere, HER2-Positive Metastatic Breast Cancer Ọrịa: 1250mg / ụbọchị
NDỤMỌDỤ 4 DIARRHEA: Kwụsị ọgwụgwọ kpamkpam.
NDỊ MGBE NTỤTA, 2 GRADE ma ọ bụ nnukwu: Nwere ike ịlele nkwụsịtụ ma ọ bụ nkwụsị nke dosing; nwere ike ịmalitegharia na ụbụrụ a na-atụ aro ya mgbe mgbu na-abawanye na 1 ogo ma ọ bụ obere.
Ọ BỤRỤ NA ỤWA NA-EZI: Benata onu:
Kedu ka esiji Lapatinib kpoo
A na-eji capecitabine (Xeloda) lapatinib ka a na-emeso ụdị ọrịa cancer ara ọhụụ na ndị na-agwọ ọrịa ọgwụ ndị ọzọ. Lapatinib uzuzu di n'ime ndi ogwu a na - akpọ ndi na - emechi kinase. Ọ na-arụ ọrụ site na igbochi ihe nke protein na-adịghị ahụ anya nke na-egosi sel cancer ka ọ mụbaa. Nke a na-enyere aka ịkwụsị ma ọ bụ gbasaa mgbasa nke mkpụrụ ndụ cancer.
Gwa ndi oru nlekọta ahuike gi ka i were Lapatinib uzuzu. Nke a na-agụnye ndị dọkịta gị, ndị nọọsụ, ndị na-enye ọgwụ, na ndị dọkịta.
Ọ bụrụ na ị nwere iwe iwe, na-agbapụ, nkwupụta ụlọnga (afọ ọsịsa), maọbụ na agụghị gị agụụ, soro dọkịta gị kwurịta okwu. Enwere ike ịnwe ụzọ isi belata mmetụta ndị a.
Akwụsị ụkwara (afọ ọsịsa) mere Lapatinib ntụ ntụ. Mgbe ụfọdụ, afọ ọsịsa abụwo ajọ njọ ma nwụọ. Soro dọkịta gị kwurịta okwu.
Ọ bụrụ na ị nwere akwa stools (afọ ọsịsa), soro dọkịta gị kwurịta okwu. Egbula igbochi afọ ọsịsa na-enweghị nyocha mbụ gị na dọkịta gị.
Ị ga-enwe mkpa ịnwale ule obi gị mgbe ị na-ewere Lapatinib uzuzu. Soro dọkịta na-ekwurịta okwu.
Zere mkpụrụ vaịn na mkpụrụ vaịn.
Ọ bụrụ na ị na-egwu digoxin, soro dọkịta gị kwurịta okwu. Ọ nwere ike ịdị mkpa ka ịchọọ ọrụ ọbara gị nke ọma ka ị na-ewere ya na Lapatinib uzuzu.
Ọgwụ a nwere ike imebi nwata ahụ a na-amụbeghị amụ ma ọ bụrụ na i were ya mgbe ị dị ime.
Jiri nchịkwa nwa ị nwere ike ịtụkwasị anya iji gbochie ime ime mgbe ị na-ewere Lapatinib uzuzu.
Ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ na ị ga-atụrụ ime mgbe ị na-ewere Lapatinib ntụ ntụ, kpọọ dọkịta gị ka ọ gbanwee.
Ngwá Ike Lapatinib
Lapatinib ntụ ntụ Marketing
Ndi Lapatinib ntụ ntụ nwere ihe ọ bụla
Tinyere mmetụta ndị dị ya mkpa, Lapatinib ntụ ntụ nwere ike ịkpata mmetụta ndị a na-achọghị. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ụdị mmetụta ndị a niile nwere ike ime, ọ bụrụ na ha emee, ha nwere ike ịchọ nlekọta ahụ ike.
Lelee dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na otu n'ime mmetụta ndị na-esonụ ga - eme mgbe ị na - ewere Lapatinib ntụ ntụ:
Ọ na-esi ike ma ọ bụ na-arụ ọrụ ume
ngwa ngwa ma ọ bụ obi mgbagwoju anya
oké afọ ọsịsa
ike na obi
ike gwụrụ ọhụrụ ma ọ bụ adịghị ike
Abdominal ma ọ bụ afọ mgbu ma ọ bụ obi
ncha ma ọ bụ akpụkpọ anụ
nkwụsị ụkwụ ma ọ bụ ụkwụ ụkwụ
anya edo edo ma ọ bụ anụahụ
Enweghi ama ama
Ihe na-afụ ụfụ, na-emegharị ahụ, na-ekpuchi akpụkpọ ahụ
ihe isi ike na ilo
mmetụta zuru ezu nke nhụjuanya ma ọ bụ ọrịa
nkwonkwo ma ọ bụ obi mgbu
ike ma ọ bụ nzepu nke nku anya ma ọ bụ gburugburu anya, ihu, egbugbere ọnụ, ma ọ bụ ire
akpụkpọ ahụ ọbara uhie, na-ejikarị ogige odo odo
acha uhie uhie, anya mmiri
ọnyá, ọnya, ma ọ bụ ntụ ọcha na ọnụ ma ọ bụ na egbugbere ọnụ
ndo nke ihe nzuzo nzuzo
Ụfọdụ mmetụta ndị dị na Lapatinib ntụ ntụ nwere ike ime na ọ naghị adị mkpa ka a gwọọ ya. Mmetụta ndị a nwere ike ị laa n'oge ọgwụgwọ ka ahụ gị na-edozi ọgwụ ahụ. Ọzọkwa, ọkachamara nlekọta ahụ ike nwere ike ịkọrọ gị ụzọ iji gbochie ma ọ bụ belata ụfọdụ mmetụta ndị a. Lelee onye nlekọta nlekọta ahụ ike ma ọ bụrụ na otu n'ime mmetụta ndị na-esonụ na-aga n'ihu maọbụ na-enye nsogbu maọbụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ha:
egbugbere ọnụ gbawara agbawa
afọ ọsịsa (nwayọọ)
ihe mgbu na ogwe aka ma ọ bụ ụkwụ
acha ọbara ọbara, ọzịza, ma ọ bụ akpụkpọ anụ
na-ekpuchi akpụkpọ ahụ na aka na ụkwụ
ọrịa, ọnyá, ma ọ bụ ntụ ọcha na egbugbere ọnụ, ire, ma ọ bụ n'ime ọnụ
obi erughị ala, iwe, ma ọ bụ ihe mgbu
okpu ma ọ bụ mbufụt nke ọnụ
tingling nke aka na ụkwụ
nsogbu na-ehi ụra
Esi zuta Lapatinib uzuzu site na AASraw
Ntuziaka ntụziaka Lapatinib Raw Powder:
1 nyochaa maka Lapatinib uzuzu (231277-92-2)
Lapatinib uzuzu bu ihe omuma